bhimphoto: संविधान समयमै जारी होला ?
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 6:28 PM
यो राजनिती भन्ने पनि अचम्म कै चिज रहेछ । सत्ता भनेपछि जे गर्न पनि पछि नपर्ने !!! एउटा ले पाएन भने अर्को को खुट्टा तान्ने, अघि जानै नदिने !!! अत: संविधान समय मै जारी हुन लगभग असम्भव नै देखिएको छ ।
साँच्चै, भन्दा अब संविधान समय मै जारी हुन्छ भन्ने कुरा कसैले गर्छ भने नपत्याए हुन्छ । सबै सत्ता का भोका छन् ।
"संविधान समयमै जारी होला भन्नेमा शँकै छ, सत्ताका भोकाहरुले के संबिधान बनाउला र खै ???"
सरकारमा भएका मन्त्रीहरुलाई खाली सरकार टिकाउनमा मात्रै ध्याउन्न छ । संविधान नबने देश भड्खालोमा जान्छ । अनि झन् लुट्न पाइन्छ भन्ने मनस्थितिका मानिसहरु पनि होलान् । जसले बनाउनु पर्ने उसलाई हतारो छैन । जे होस्, अझै ढिलो भएको छैन । अब पनि एकजुट नभए संविधान बन्ला जस्तो छैन । हेर्दै जाऔं के के गर्छन् हाम्रो देशका नेताहरुले ।